Indlela yokwenza i-Gymnastics Bridge Stretch
Iibhuloho zibalulekileyo kwindawo yokuqala kwi-gymnastics. Ziyindlela enhle yokwelula nokwakha imisipha engundoqo oya kuyidinga ukwenza ezinye izinto. Amanqwanqwa angabonakali kunzima kodwa ukululalisa ezi zihlunu kunokuba nzima kunokuba ucinge.
Ngena kwindawo yokuqala yeBhuloho
Nantsi indawo efanelekileyo yokuqala ibhuloho.
Uxoxe ngomva wakho
Gqiba ngamadolo uze ugcine iinyawo zakho zihlala phantsi
Beka izandla zakho ngeendlebe zakho ngeentende ezijongene nomhlaba
Pushisa umzimba wakho kude kube kuphela izandla zakho neenyawo zithintela umhlaba, kwaye umva wakho uhlaziywe.
Ngena kwiNgqungquthela yeBridge Bridge
Xa usenyuka kwibhuloho, lungisa izandla kunye nemilenze kwaye uphendule amahlombe akho phezu kwentloko yakho. Izandla zakho kumahlombe akho kufuneka zenze umgca othe ngqo kumgangatho.
Gcina iminwe yakho kunye neenzwane zihlanganiswe nomzimba wakho, zingaphenduli. Gcina ndawonye amadolo.
Khumbula ukusebenzela kule ndawo. Njengokwahlula, mhlawumbi ngeke ukwazi ukushaya kwindawo efanelekileyo yokuqala (okanye ishumi lakho) zama. Gcina kuyo! Ungalokothi uchukumise ngaphezu kwezinto eziziva ukhululekile, kwaye ungabambeli ixesha elide ukuba uzive uhlungu.
Nciphisa umzimba wakho ngokunyanzela kumgangatho, uhlasele isifuba sakho esifuba sakho xa uhla.
Khawuhlale phantsi uze uthathe amadolo akho. Idwala ebuyela emlenzeni wakho, emva koko uye phambili ukuya kuhlala. Phinda amaxesha amaninzi. Amagymnasts amaninzi enza oku "ngxondorha kunye ne-roll" emva kwebhuloho kuba yenza umva wabo uzive kakuhle.
Ukuqhuba: Iinyawo kwiMat
Ukujolisa amahlombe akho ngaphezulu, faka iinyawo zakho kwi-mat. Ukuba uziva unzima kakhulu ukwenza ibhuloho phantsi, oku kunokukunceda ukwakha ukuguquguquka kwakho ukuze ibhuloho phantsi.
Ibhuloho yesigxina sinokukunceda ekujoliseni ukuguquguquka ngakumbi. Ungazami le nto de uze wenze ibhuloho rhoqo rhoqo-kunzima ukunyuka.
Yiyiphi i-Direction esifanelekileyo i-Skater Jump ne-Spin?
Indlela Yokwenza Ukutshiza iDuck kwiZikwi ze-Ice
Epreli Ukubhala Kukhuthaza
Phindela phezulu kwaye ubuyisele i-MySQL yolwazi
Ukusebenzisa i-TDictionary yeeHash Tables kwi-Delphi